अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा नैतिक प्रश्न सकिन्छ ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा नैतिक प्रश्न सकिन्छ ?
April 24, 2020 April 25, 2020 GRISHI243
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नै’तिकता अन्त कतै नभएको भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। झाँक्रीले ट्वीट गरेकी छिन् राजनितीमा नैतिकता हुन्छ भनेर शिक्षा दिने क. माधव नेपाल र अनाहकमा ग़लत अर्थ लगाएर राजिनामा दिन बा’ध्य पारिएका क।सेर बहादुर तामाङले नैतिकता आफूमा मात्र सिमित गर्नु भएछ’ उनले प्रश्न गरिन् । अन्त नैतिकता कतै देखिन्छ? झाँक्री अध्यादेशबारेमा सुरुदेखि नै वि’रोध गर्दै आइरहेकी छिन्। अध्यादेश जा’री लगत्तै उनले ट्वीट गरेकी थिइन् ‘कमरेड, कानुनले पार्टी फूट्न र रोक्न दुबै सक्छ। जसको पार्टी बिभाजन गर्ने दुश्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अ’राध हो।
किन की आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ। बिभाजन होइन।मानवीय संकटको यो बेला एकाएक मन्त्रीपरिषदबाट बिबादास्पद अध्यादेश पास गर्नु शीतलनिवासबाट खाम साटेर हिड्नु, विपक्षी दलका सांसदलाई अपहरण शैलीमा होटलमा राख्नु, अनि बहुराष्ट्रको उदेश्य पुरागर्न मधेशबादी दलको एकता, के नेपाली राजनीतिका यि सामान्य घ’टना हुन? यि घ’टनाको पछाडी कसको हात छ? खोजौ। नेकपाभित्र अध्यादेश विवाद उग्र रुप लिइरहेको बेला झाँक्रीले अर्को ट्वीट गरेकी थिइन्। सरकारले अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै उनले फेरि अर्को ट्वीट गरिन् अध्यादेश फिर्ता भयो रे, के योसंगै सम्पूर्ण राजनितीक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ सकिदैन।
अब के हुन्छ? सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदमा प्र’तिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश जारीपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र वि’वादले उग्र रुप लिएको थियो। नेकपाभित्र बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। चौतर्फि विरोध र आलोचनापछि मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धित दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिले शुक्रबार खारेज गरेकी थिइन्।